သတင်း - သင့် Glass Door ရေခဲသေတ္တာရှိ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအကြောင်း သင်မသိသောအရာ
ရေခဲသေတ္တာ/အအေးခံ မှန်တံခါးကို လှမ်းဝင်ပါ။
Chest Freezer မှန်တံခါး
Wine Cabinet Glass Door ၊
Tempered Glass ၊
သင့် Glass Door ရေခဲသေတ္တာရှိ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအကြောင်း သင်မသိသောအရာ
ဖန်တံခါးရေခဲသေတ္တာများသည် စိုထိုင်းဆများသောနေရာများတွင် ဖန်၏အပြင်ဘက်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု (ရေ) ဖြစ်သည်ကို သင်သိပါသလား။ ၎င်းသည် ဆိုးရွားသောအသွင်အပြင်ကိုပေးရုံသာမက သင်၏သစ်မာကြမ်းပြင်တွင် ရေများဖြစ်ပေါ်ကာ ပြုပြင်၍မရသောပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကြွေပြားကြမ်းခင်းများသည် အန္တရာယ်ရှိစွာ ချော်ထွက်စေသည်။
ယခင်က မှန်တံခါးရေခဲသေတ္တာကို ဈေးဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များတွင် စီးပွားဖြစ်ရေခဲသေတ္တာအဖြစ်သာ အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့် မှန်တံခါးကို ရေခဲသေတ္တာဝယ်သည့်အခါ လူအများက သဘောမပေါက်ကြပေ။ သို့သော် ယခုအခါ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု များပြားလာသည်နှင့်အမျှ မှန်တံခါးကို ရေခဲသေတ္တာများပိတ်ကာ ဖန်တံခါးများကို ဖယ်ထုတ်လာကြသည်။ အိမ်တိုင်းတွင်ရှိပြီး လိုအပ်သော ထုတ်ဝေမှု။
လေထုထဲတွင် ရေ (စိုထိုင်းဆ) သည် အခြေခံအားဖြင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ၏အတွင်းပိုင်း အေးသောကြောင့် ဖန်ခွက်သည်လည်း အေးသွားကာ ရေခဲသေတ္တာအပြင်ဘက်တွင် စိုစွတ်သောရာသီဥတုနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့် သင်နံနက်ခင်းကဲ့သို့ပင် ရေများဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အိမ်အတွင်းက ပြတင်းပေါက်တွေ မြူခိုးတွေတက်နေတာကို မြင်ရတော့ အပြင်ဘက်မှန်က အရမ်းအေးနေတော့ အတွင်းထဲကို ရေတွေထွက်လာတယ်။
ဤပြဿနာကို တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးစားသူ အများအပြားမရှိသောကြောင့် ယခုခေတ်တွင် သင့်အား စိတ်ကူးတစ်ခု ပေးနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံမှတ်စုအချို့ကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။
1. ရိုးရိုးမှန်နှစ်ထပ် (2 x အပြား) ရေခဲသေတ္တာများသည် စိုထိုင်းဆ 50-55% ခန့်တွင် condensate စတင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် စျေးကွက်စံနှုန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် 65-70% ထက်ကျော်လွန်ပါက ရေကို သွန်းလောင်းမည်ဖြစ်သည်။
2. မျက်နှာပြင်3x အလွှာ2မဟုတ်သောကြောင့် ရှေ့ pane သည် အေးမသွားသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် 60-65% သည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမစတင်မီတွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
3. ထို့နောက် LOW E ဖန်ထဲသို့ ရွှေ့သည်၊ ၎င်းသည် အပူရောင်ခြည် 70% ပိုကောင်းသော ဖန်သားပေါ်တွင် ပါ၀င်သော အထူးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းသည် အအေးကို ပိုကောင်းစေပြီး အပြင်ဘက်ဖန်ကို ပိုမိုနွေးထွေးစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ အများစုသည် Low E သည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမစတင်မီ 70-75% အထိ ရရှိနိုင်သည်။
4. Argon Gas Fill - ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ယူနစ်များစွာတွင်ရှိပြီး ဓာတ်ငွေ့2x panes များကြားတွင် အလွှာတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ရှေ့မှန်အအေးမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုနှင့် ပေါင်းစပ်ပါက အနည်းဆုံး နောက်ထပ် 5% ကို ကူညီပေးပါမည်။ စိုထိုင်းဆပုံစံများမတိုင်မီ။
5. Heated Glass – ဖန်ခွက်ပေါ်ရှိ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို 100% ရပ်တန့်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ အပူခံဖန်ခွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 50-65 Watt ခန့်ရှိသော ပါဝါ 50-65 Watt ရှိသည့် ဗို့အားနိမ့်တွင် လျှပ်စစ်အားသွင်းသည့် ဖလင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ယူနစ်၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အနည်းဆုံး နှစ်ဆဖြစ်ပြီး အများစုမှာ စွမ်းအင်3ဆဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အလွန်အဖြစ်များသော ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် တံခါးဘောင်ပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်သည်။
6. ကိုယ်ထည်နှင့် တံခါးဘောင်ပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် စျေးသက်သာသော ယူနစ်များတွင် အလွန်အဖြစ်များသည်။ အတွင်းကိုယ်ထည် လျှပ်ကာများ၏ မြှုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် စက်ရုံများစွာတွင် အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး အမြှုပ်ထွက်ခြင်း ညံ့ဖျင်းသော အလုပ်သည် အထူးသဖြင့် ယူနစ်သည် stainless steel ဖြစ်ပါက ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအားလုံးကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အအေးဓာတ်သည် ရေခဲသေတ္တာမှ တံခါးဘောင်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ အစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်၊ ထို့နောက် ၎င်းသည် ဖန်ခွက်ကဲ့သို့ပင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ပေးသွင်းသူသည် ၎င်းကို ဖုံးအုပ်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ အတွင်းနံရံများမှတဆင့် condenser ၏ပူသောပိုက်အစိတ်အပိုင်းကိုထားရှိခြင်းဖြင့်တိုက်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ အတိုချုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် လူများသည် ၎င်းတို့ဝယ်သည်များကို သတိမပြုမိကြပေ။
Qingdun ရွာ၊ Zhongguan မြို့၊ Deqing ကောင်တီ၊ Zhejiang ပြည်နယ်၊ Prc